Econsultancy waxay soo saartaa Tilmaamaha Suuqgeynta Mawduuca B2B | Martech Zone
Econsultancy waxay soo saartaa Tilmaamaha Suuqgeynta B2B
Khamiista, Oktoobar 6, 2011 Axad, Juun 7, 2013 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay inaan wax yar ka qurxinay baaxaddeena kore ee goobta ... hubkaa ayaa hada lagu badalay suuq-geynta. Waxay u muuqataa in awoodaha la hagaajiyay ay suuq-geynta suuq-geynta markale. Markan, runtii waan jecelahay isbeddelka. Ereyga balooggu wuxuu sii gaboobayaa… oo lagu daray dhammaan kanaallada kale ee loo qaybiyo iyo kor loogu qaado, runti waxay noqotay qayb ka mid ah istiraatiijiyadda guud.
Dadka waawayn ee Econsultancy waxay soo saareen hage kale oo weyn oo loogu talagalay ganacsiga ganacsiyada (B2B): Suuqgeynta Mawduuca B2B: Foomamka, Qaybinta iyo Cabbiraadda - Dhisid qaab loogu talagalay Nidaamka Suuqgeynta Macluumaadkaaga B2B.
Tilmaamuhu wuxuu diiradda saarayaa saddexda tiir ee suuqgeynta waxyaabaha ku jira:
Noocyada tusmada - Tani waxay la xiriirtaa noocyada kala duwan ee waxyaabaha laga heli karo keydka hubka, oo ay ku jiraan qoraal, hadal iyo muuqaalba.
Qaybin ka kooban - Tani waxay la xiriirtaa wadiiqooyinka suuqgeynta ee aad u hayso daabacaadda iyo qaybinta waxyaabahaaga si loo sugo soo-gaadhista ugu badnaan.
Cabirka mawduuca - Tani waxay la xiriirtaa qalabka qiimeynta ee aad gacanta ku hayso si ay gacan uga geysato aqoonsiga saameynta ay maaddadaadu ku leedahay e-commerce tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah (KPIs) sida taraafikada iyo is-beddelka iyo ka dib markaa waxqabadka wanaagsan ee lagu hagaajinayo kuwa KPI-yada.
Tilmaamuhu wuxuu sidoo kale bixiyaa aragti ku saabsan waxa faa'iidooyinka ganacsigu yihiin, oo ay ku jiraan wacyigelinta sumadda, helitaanka macaamiisha, taraafikada goobta iyo jiilka hoggaaminta, maareynta hoggaanka, haynta macaamiisha, iyo hoggaaminta fikirka. Waan jeclahay xaqiiqda ah in haynta macaamiisha waa heer sare oo ah hadaf urur, laakiin waxaan ka xumahay in shirkado badani aysan arkin hogaaminta fikirka iyada oo ah hadafka koowaad ee Suuq-geynta Mawduuca B2B. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta aan ugu aragno waxyaabo badan oo crappy ah!
Download a tusaalaha B2B Tusmada Suuq-geynta Tusmada Habdhaqanka ugufiican halkan si aad u aragto tusmada buuxda iyo qoto dheer ee hagaha. Isku qor Econsultancy adoo adeegsanaya xiriiriyeheena xiriirka haddii aad jeclaan laheyd inaad hesho hagitaankan iyo tan kale kuwa kale sanadka oo dhan.
Tags: b2bhubkaa b2bsuuq geynta b2bqaybinta b2bcabbirka b2b
Mahadsanid Mudane Jobs
Mobile waa kan. Boggaagu maahan.